ရှညောသား: June 2011
စာရေးသူ ရှညောသား at Tuesday, June 14, 20115comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဒီနေ့မနက်တော့ မနေ့ကကျန်တဲ့ ငါးဟင်းအနှစ်ရယ်၊ ငါးတစ်တုံးရယ်ကို ထမင်းရယ်၊ အာလူးပြုတ်ပြီးသားရယ် ရောနယ်ပြီး နံနံက်စာအတွက်ဖြေရှင်းလိုက်ပါတယ်။ သူများတွေဆီမှာဖတ်ဖူးတာတော့ လုပ်နည်းက တစ်မျိုးပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ရှိတာလေးကိုပဲ ဖြစ်သလိုလုပ်စားလိုက်တာ။ အောက်က ပုံလေးတွေ အတိုင်းပါပဲ။ မစားခင် ဓာတ်ပုံလေး ရိုက်ထားလို့ ဘလော့ခ်မှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ထမင်းနယ်ပြီးသားကို လုံးထားတာမို့ အာလူးထမင်းလုံးဆိုပြီး နာမည်တတ်လိုက်တာပါ။
ထမင်းလုံးရယ်၊ ငရုတ်သီးတောင့်ကြော်၊ နံနံပင်နဲ့ ချဉ်ရည်ဟင်းလေးပါ တွဲပြီး နံနက်စာကို စားလိုက်ပါတယ်။
အားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာ ကြပါစေ...။
စာရေးသူ ရှညောသား at Tuesday, June 14, 20110comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Sunday, June 12, 20112comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook